कास्की च्याम्पियनसँग खेल्दै साफ यू १८ को तयारी ! | Hamro Khelkud
कास्की च्याम्पियनसँग खेल्दै साफ यू १८ को तयारी !
पोखरा( हाम्रो खेलकुद)– कास्की जिल्लाको लिग च्याम्पियनसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै नेपाली युवा टोलीले अर्को महिना स्वदेशमा आयोजना हुने साफ यू १८ च्याम्पियनसिपको तयारी गरिरहेको छ । प्रशिक्षणका लागि भन्दै भदौ २३ गते पोखरा पुगेको टोलीले बिहीबार कास्कीको लिग च्याम्पियन आदर्श युवा क्लबसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो ।
सहारा क्लब पोखराको दोबिल्लास्थित एकेडेमीको मैदानमा भएको खेलमा यू १८ टोली १०–१ ले विजयी भएको थियो । प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले दोस्रो हाफमा पुरै सेट परिवर्तन गरेका थिए । ए टिमले पहिलो हाफमा ६ गोल र बी टिमले दोस्रो हाफमा ४ गोल गरेको थियो । शीशिर लेखीले सातौं मिनेटमा टोलकिा लागि पहिलो गोल गरे ।
११ औं मिनेटमा मनीष थापाले १४ औं मिनेटमा नितिन थापाले, २७ औं मिनेटमा रोशन राना मगरले, ३५ औं मिनेटमा पदक भट्टराईले र ४० औं मिनेटमा मनीष डाँगीले गोल गरे ।दोस्रो हाफमा सुचु गुरुङले २ (७७ औं र ८०औं मिनेट) दर्शन गुरुङले ७० औं र कैशाल लामिछानेले ८५ औं मिनेटमा गोल गर्दै फराकिलो जित दिलाए । आदर्शले ७८ औं मिनेटमा गोल फर्काएको थियो । यु १८ ले अर्को खेल आइतबार पोखरा ११ सँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने बताइएको छ ।
नेपाल रहेको समूह एमा माल्दिभ्स र भुटान छन् । भारत, श्रीलंका र बंगलादेश समूह बीमा छन् । राउन्ड रोविन लिग पछि समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । दुवै सेमिफाइनल असोज १० गते हुनेछ । त्यस्तै फाइनल असोज १२ गते हुनेछ ।